ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको लोभलाग्दो नाफा - Aarthiknews
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको लोभलाग्दो नाफा
विहीबार, ०९ माघ २०७६
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस त्रैमासमा कम्पनीको खद नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ गुणाले बढेको छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा रू.१ करोड ९६ लाख ७ हजार खुद नाफा गरेको यस कम्पनीले यस वर्ष रू.७ करोड ८७ लाख १२ हजार खुद नाफा गर्न सफल भएको हो ।
यस वर्ष गत वर्षको भन्दा सञ्चालन मुनाफा ४ गुणा वृद्धि भएको छ । गत वर्ष रू.२ करोड ९१ लाख १ हजार रहेको सञ्चालन मुनाफा यस वर्ष रू. १२ करोड ३६ लाख ९१ हजार भएको छ । चुक्तापूँजी ३८ प्रतिशत वृद्धि भएर रू. २५ करोड ९५ लाख ७५ हजार पुगेको छ भने जगेडा कोष रकम ३७३ दशमलव ८५ प्रतिशत बढी अर्थात् रू. १६ करोड ६० लाख ६५ हजार कायम भएको छ । यो वर्ष नाफासँगै कम्पनीको जगेडा कोष रकममा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । निक्षेप संकलन गत वर्षभन्दा २ गुणा बढी भएको छ भने कर्जा प्रवाह ८४ प्रतिशत बढी भएको छ ।
गत वर्ष रू. ५६ करोड ६४ लाख ९६ हजार निक्षेप उठाएको कम्पनीले यस वर्ष रू.१ अर्ब २० करोड ८७ लाख ९७ हजार उठाएको छ ।त्यस्तै गत वर्ष रू.२ अर्ब २० करोड ४४ लाख २९ हजार कर्जा प्रवाह गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू.४ अर्ब ५ करोड ९४ लाख ९७ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ९९ रहेको छ भने सम्भावित जोखिम शिर्षकमा रू.१ करोड ६९ लाखभन्दा बढी रकम छुट्इयाएको छ । दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू.६० दशमलव ६५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू.१६३ दशमलव ९८ छ । यस अवधिसम्म कम्पनीले ४६ ओटा जिल्लामा ६७ ओटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत ९० हजारभन्दा बढी सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।